1 Kronike 10 | IBhayibhile Kwi-Intanethi | INguqulelo Yehlabathi Elitsha
1 Kronike 10:1-14
10 Ke kaloku amaFilisti+ alwa imfazwe noSirayeli; aza amadoda akwaSirayeli asaba phambi kwamaFilisti yaye ayesiwa phantsi ebulewe eNtabeni yeGilbhowa.+ 2 AmaFilisti athana mbende noSawule noonyana bakhe; ibe amaFilisti amxabela uYonatan+ noAbhinadabhi+ noMaleki-shuwa,+ oonyana bakaSawule.+ 3 Umlo waba nzima kuSawule; baza abo babetola ngesaphetha ekugqibeleni bamfumana, wangxwelerhwa ngabatoli.+ 4 Wandula ke uSawule wathi kumphathi wezikrweqe zakhe:+ “Rhola ikrele lakho+ uze undihlabe ngalo, ukuze la madoda angalukanga+ angezi aze andiphathe kakubi.”+ Umphathi wezikrweqe zakhe akavumanga,+ ngenxa yokuba wayesoyika kakhulu. Ngoko uSawule walithabatha ikrele waza waziwisa phezu kwalo.+ 5 Xa umphathi wezikrweqe zakhe wabonayo ukuba uSawule ufile, waziwisa naye phezu kwekrele waza wafa.+ 6 Wafa ngaloo ndlela ke uSawule noonyana bakhe abathathu,+ nabo bonke abo bendlu yakhe bafa kunye. 7 Athi onke amadoda akwaSirayeli awayesentilini akubona ukuba asabile nokuba uSawule noonyana bakhe bafile, azishiya izixeko zawo aza asaba;+ emva koko afika ke amaFilisti ahlala kuzo. 8 Kwathi ke ngemini elandelayo, xa amaFilisti afikayo ukuza kuhluba+ ababuleweyo, afumana uSawule noonyana bakhe bewile eNtabeni yeGilbhowa.+ 9 Amhluba aza ayinqumla ke intloko yakhe+ nesikrweqe sakhe athumela kwilizwe lamaFilisti macala onke ukwazisa+ izithixo zawo+ nabantu. 10 Ekugqibeleni azibeka izikrweqe zakhe endlwini yothixo wawo,+ aza ukakayi lwakhe alubethelela endlwini kaDagon.+ 11 Bakuva bonke abaseYabheshe+ eGiliyadi awakwenzayo amaFilisti kuSawule.+ 12 Ngoko esuka onke madoda anobukroti asithabatha isidumbu sikaSawule nezidumbu zoonyana bakhe azisa eYabhashe aza awangcwaba amathambo abo phantsi komthi omkhulu+ eYabheshe;+ azila+ ke ukutya kangangeentsuku ezisixhenxe. 13 Wafa ngaloo ndlela ke uSawule ngenxa yokungathembeki+ kwakhe awakwenza ngokungabi nalukholo kuYehova ngokuphathelele ilizwi likaYehova angaligcinanga nangokubuzisa kwakhe koneshologu.+ 14 Akabuzisanga kuYehova.+ Ngoko ke wambulala waza ubukumkani wabunikela kuDavide unyana kaYese.+
1 Kronike 10